DHAGEYSO: Somaliland Oo War Ka Soo Saartay Askarigii Dhagaxa Lagu Dilay - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DHAGEYSO: Somaliland Oo War Ka Soo Saartay Askarigii Dhagaxa Lagu Dilay
Taliska Booliska Soomaaliland ayaa faah faahin waxa ay ka bixiyeen askari ka tirsanaa ciidamadooda oo dhagax lagu dilay xilli uu ku sugnaa meel ka mid ah Magalada Borama ee Gobolka togdheer.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo Taliyaha Booliska Gobolka Togdheer ayaa waxa ay faah faahin ka bixiyeen qaabka uu u dhacay dilka askarigaas.
Taliye Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa sheegay in maleeshiyaad hubeysan ay weerareen shirkado ku yaalla deegaan lagu Magacaabo Faqa Ayuub,isla markaana ay halkaasi rabshado ka sameeyeen .
Sidoo kale waxa uu sheegay in Ciidamada Soomaaliland ay maleeshiyaadkaas ay ugu tageen goob ay ku sugnaayeen,hayeeshee ay dhagax kusoo tureen taas oo keentay in mid ka mid ah ciidamada uu kaga dhacay maskaxda sidaasina uu ku geeriyooday askariga oo lagu Magacaabi jiray Keyse Maxamed.
Taliyaha Ciidanka Booliska ee Gobolka Togdheer Axmed Ow cali Shabeelle ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in askarta ka tirsanaa Ciidamada Soomaaliland ee dhagax lagu dilay ay kor u dhaafayaan ilaa 10 askari, waxana uu ugu baaqay Shacabka inay Ciidamada la Shaqeeyaan.